Barnaamijyada - Qalabka Qalabka | Wararka Gadget (Bogga 5)
Sida loo habeeyo talooyinka Sawirada Windows 8.1
Xeelad yar ayaynu ku qeexi doonnaa waxa aan doonayno inaan ku aragno Sawirada Sawirka ee Windows 8.1.
Sida looga soo saaro astaanta faylasha DLL iyo EXE ee Windows
Haddii aad jeceshahay astaanta faylka 'EXE' ama 'DLL file', waxaad kala soo bixi kartaa astaamaha feylasha ee Windows.
Sida loo dhaqaajiyo pixel tilmaamaha jiirka pixel ee Windows
Tilmaamaha jiirka ayaa loo dhaqaajin karaa pixel pixel iyadoo xeelad yar lagu helayo Windows ama codsi dhinac saddexaad ah oo la adeegsanayo kiiboodhka.
Ku raaxayso Star Wars daaqada terminal-ka Windows
Star Wars oo kujira lambar ASCII waxaa lagu raaxeysan karaa barta amarka ee gudaha Windows haddii aan dhaqaajino adeegga Telnet.
Sida loo galiyo fiidiyowga Youtube PowerPoint 2010
Khiyaanooyin yar ayaynu ku haysannaa suurtogalnimada inaan ku dhejinno fiidiyaha YouTube-ka qaab-hawleed soo-bandhig PowerPoint 2010 ah.
Sida loo beddelo xallinta shaashadda ee Windows iyadoo la adeegsanayo tuuryo kumbuyuutar
Adeegsiga aalad yar oo loogu talagalay Windows-ka waxaad fursad u heli doontaa inaad beddesho xallinta shaashadda adoo adeegsanaya toobiyeyaasha kumbuyuutarka.
Sida loo dejiyo oo loola shaqeeyo OneNote Clipper
OneNote Clipper waa adeeg naga caawin doona inaan duubno oo keydinno waxyaabaha ku jira shabakadda si dib loogu eego hadhow koontadayada 'Outlook.com'.
Sida loo sameeyo wicitaanada HD ee Skype oo laga helo biraawsarka internetka
Waxaan ku tusineynaa dhowr talaabo oo isku xigxig ah oo aad ku dhaqaajineyso Skype HD biraawsarka internetka adoo adeegsanaya qalab bilaash ah oo ka socda Microsoft.
Sida loo isticmaalo EasyBCD si loo abuuro rakibo USB Windows ah
EasyBCD Waa aalad yar oo naga caawin doonta sameynta pendrive USB ah oo rakibe ka ah Windows iyada oo aan loo baahneyn in la qaabeeyo.
Sida loo dhigo calaamadeynta dukumiintiyada Word
Haddii aad u isticmaasho Microsoft Word 2010 wixii ka dambeeya, waxaad ku dhex-dari kartaa sawir astaan ​​u ah dukumiintiyadaada si looga fogaado in la xado.
Barnaamijyada ugu fiican ee Chromecast
Chromecast waa mid ka mid ah aaladaha moodada u leh inuu ku ciyaaro maaddooyinka multimedia ee qalabkaaga Android ee shaashaddaada TV-ga ah.
Baro sida loo daawado nooc kasta oo fiidiyow ah iPad-kaaga cusub iyo sidoo kale sida loogu daawado si isku mid ah Mac-gaaga
Sida loo joojiyo adeegsiga barnaamijyada ku jira Windows ee leh barnaamijka "Blocker Program"
Xannibaadaha Barnaamijka waa aalad naga caawin doonta inaan ka hortagno fulinta wixii codsi ah ee lagu rakibo Windows-ka.
Sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Xafiiska sharciga ku diiwaangashan 2013
Haddii aan haysanno furaha wax soo saarka ee Xafiiska 2013, markaa waxaad haysataa 4 beddelaadyo gaar ah oo aad kala soo bixi karto rakibayaasha goobta rasmiga ah.
Ku rakib fidinta Safari si aad u soo dejiso fiidiyowyada YouTube
Baro sida loo rakibo ballaadhinta biraawsarka Safari si aad si toos ah ugu soo dejiso fiidyowyada YouTube-ka
Sida loo ogaado haddii fayraskeenu si fiican u shaqeynayo
Waxaan soo sheegnay xeelad yar oo aan ku ogaan karno haddii antivirus-ka aad ku rakibtay Windows-ka uu si fiican u shaqeynayo.
Sida loo diro farriimaha iyo feylasha leh Pushbullet laga bilaabo Windows illaa qalabka moobaylka
Pushbullet waa codsi yar oo naga caawin kara inaan fariimaha ama faylasha uga dirno Windows qalab kasta oo mobile ah.
Sida loo dejiyo Vine kombiyuutarka shaqsiga ah
Xeelado yar yar ayaan ku hagaajin karnay Vine si aan uga dhigno inay si fudud ugu shaqeyso kombuyuutarradeena shaqsiga ah.
Sida loo hubiyo emaylka cusub adigoon galin Gmail
Ogaysiiska Gmail waa dhammaystir na soo ogeysiin doona markii e-mayl cusub yimaado oo aan toos loogu aadin sanduuqa.
Sida fiidiyowga loogu tafatiro bilaash Youtube
YouTube waxay bixisaa suurtagalnimada in si fudud looga beddelo fiidiyowyadeeda boggeeda iyada oo loo marayo kala-guur, sawirro, qoraallo, muusig iyo waxyaabo kaloo badan.
Sida loola shaqeeyo Vine kombiyuutarka caadiga ah
VineClient waa qalab loogu talagalay Google Chrome oo noo oggolaan doona inaan la shaqeyno Vine-ka Twitter-ka ee kombiyuutarka caadiga ah.
Sida loo rakibo far kasta oo qoraal ah iOS-ka iyo JAILBILA la'aan
Codsi si aad u awoodo inaad ku rakibto nooc kasta oo font ah oo ku saabsan macruufka adiga oo aan u baahnayn in la xiro
Hawlaha Shaashadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad la wadaagto shaashadda kombiyuutarkaaga mid kale isla shabakadda maxalliga ah
Hawlaha Shaashadu waa barnaamij loo isticmaali karo in lala wadaago shaashada kombiyuutarkaaga kuwa kale ee isla shabakadda maxalliga ah.
Sida looga galo Xbox Live Xbox One
Marka Xbox One uu ku xirmo, baro sida loo galo Xbox Live
Ma ogtahay waxa beddelka ah ee la isticmaali karo halkii laga isticmaali lahaa Winamp?
WinAmp way joogsatay jiritaankeeda sidaa darteedna, way ku habboon tahay in la bilaabo helitaanka noocyo kale oo codsiyo ah si loo dhagaysto muusikada.
Macaamiisha fariimaha degdega badan ee ugufiican ee Windows
Waxaan ku tusineynaa taxane ah macaamiil fariin deg deg ah oo multiprotocol weyn Windows.
Sidee ayuu OneDrive u shaqeyn doonaa ka dib markii magaca SkyDrive la beddelo?
OneDrive waa magaca cusub ee SkyDrive, kaas oo leh astaamo yar oo cusub oo lagu baaro sida ay sheegtay Microsoft.
Trick si aad u nadiifiso keydka Windows Store iyo taariikhda
Bakhaarka ku yaal Windows Store wuxuu ka koobnaan karaa taariikhda wax iibsigeena iyo in ka badan, isagoo tirtiraya macluumaadkan sababo gaar ah awgood.
Sida loo sameeyo wicitaano fiidiyoow ah oo qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo lala yeesho Gruveo internetka
Gruveo waa codsi websaydh ah oo naga caawin doona inaan u yeerno wicitaanno qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo lambar iyo been abuur ah.
Sida looga faalloodo farriimaha codka ee Facebook ee leh Google Chrome
Qalabka loogu talagalay Google Chrome wuxuu naga caawin karaa inaan uga tagno duubista codka sida faallooyinka qoraallada Facebook.
Sida loogu diro nuxurka dukumiintiga qoraalka Windows Memory
Clip waa amar aan u adeegsan karno inaan ku soo saarno waxa ku jira feyl qoraal ah oo ku saabsan xusuusta sabuuradda Windows
Windows 8.1 wuxuu si otomaatig ah uqarin doonaa kumbuyuutarkaaga kumbiyuutarka adag
Windows 8.1 waxay soo jeedineysaa in la kaydiyo darawallada adag ee wadaniga ah illaa iyo inta aadan ka casriyeyn Windows 8.
NFO iyo DIZ faylasha, maxay yihiin iyo sida loogu akhristo Windows-ka
Waxaan xusi doonnaa xoogaa khiyaanooyin ah si aan awood ugu yeelano inaanu aragno faylasha nooca NFO iyo DIZ ee Windows-ka.
Ma ogtahay in Windows 8.1 aad awalba daabacan karto 3D?
Windows 8.1 wuxuu leeyahay astaamo cusub oo ka mid ah, kuwa isticmaalaya 3D Daabacaad ahaan asal ahaan qalabkooda bilaashka ah.
Xidh kombiyuutarkaaga Windows 8.1 adoo isticmaalaya shaashadda qufulka
Windows 8.1 ayaa lagu damin karaa iyadoo xeelad yar la adeegsanaayo Lock Screen-ka nidaamka qalliinka.
Ma ogtahay waxa MIcrosoft ka soo jeediyo Xafiiskeeda aaladaha moobaylka?
Falanqeyn yar oo ku saabsan waxa Microsoft ay na siiso iyada oo leh xafiiskeeda Office ee moodooyinka kala duwan ee qalabka moobiilka.
Sida loo tijaabiyo astaamaha cusub ee KitKat Android 4.4 ee Windows
KitKat Android 4.4 waa nooca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka Google ee aan hadda ugu dayan karno Windows PC-keena.
Sidee looga soo kabtaa taleefanka gacanta ee kaa lumay Android
Laba Codsi oo naga caawin kara inaan ku soo ceshano taleefanka gacanta ee lumay Android talaabooyin fudud iyo dadaal yar.
Sida loo joojiyo faaruqinta Recycle Bin ee Windows
Laba hab oo aad u isticmaali karto inaad ku tirtirto feylasha ku jira Windows adigoon faaruqinin Recycle Bin.
Sida loo helo RSS-kaaga ugufiican JellyReader
JellyReader waa adeeg internet oo aad u adeegsan karto inaad raacdo wararka RSS ee bilaashka ah kuna xiran Google Drive ama DropBox.
Hayso Windows XP, Windows 7 iyo Windows 8 oo ku yaal pendrive mahadnaqa WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB ayaa naga caawin doonta inaan helno rakibayaasha 3 nooc oo Windows ah oo ku jira USB pendrive.
WinShake, oo ah gargaar laga boodo shaashadda bilowga iyo Windows 8 Desktop
WinShake waxay naga caawineysaa inaan si dhaqso leh u jiifano shaashadda Start illaa Windows 8 Desktop.
Antivirus, kuwa jira oo dhan kee baa fiican?
Waxaan sameynay falanqeyn yar oo ku saabsan isticmaalka saxda ah ee ay tahay in lala qaato antivirus-ka kala duwan ee ka jira suuqa Windows-ka.
10ka astaamo ee ugufiican ee aad kuqaddarin doonto Windows 8.1
Windows 8.1 wuxuu leeyahay xeelado badan oo loogu talagalay dadka isticmaala kiniinka leh OS-kan, 10 ka mid ahi waa kuwa ugu muhiimsan sida ay sheegtay Microsoft.
Dhinacyada xiisaha leh ee ay tahay inaad ka ogaato Windows 8.1
Windows 8.1 waa loo habeyn karaa si aan uga dhigno shaqadeena nidaamkaan qalliinka dhaqso iyo waxtar badan.
Sida loogu falanqeeyo kumbuyuutarkeena Windows Offender Offline
Windows Defender Offline waa nooc gaar ah oo ay Microsoft soo bandhigtay si ay ugu shaqeyn karto USB stick ama CD-ROM ama DVD disk.
Sida loo dejiyo erey sir ah
Hagaha si aad u hubiso haddii ereyada sirta ah ee aad isticmaasho ay yihiin kuwo aamin ah. Haddii aysan ahayn, waxaan ku bari doonaa sida loo dejiyo erey sir ah.
Tilmaamaha aasaasiga ah ee isticmaalka Kindle
Baro sida loogu isticmaalo qalabka Kindle qaab cad oo fudud
Top 5 Apps ee Muusikiistayaasha (Mac OS X)
Muusiggu waa muhiim maanta waana sababta aan kuu tusi doono waxa aniga ii ah 5 codsi ee ugu fiican muusikiisteyaasha la jaan qaadi kara OS X Mavericks
Tweetbits-ka ayaa kuu oggolaanaya inaad ku abaabusho tweets-kaaga qaab-dhex-dhexaad wacan
Baro Tweetbits oo abaabulo
Waxaan soo bandhigeynaa tobanka codsi ee ugu fiican ee sawir qaadista ee iPhone ee 2013 sida uu qabo Vinagre Asesino
Baro sida aad u badali karto astaan ​​kasta oo ku jirta Windows 8
Maanta Vinagre Asesino waxaan kahadleynaa 5-ka websaydh ee aan ugu jecelahay inaan kala soo baxno noocyada aan ku diyaarino shaqadeena
Dami oo daar iPhone oo leh badhanka AWOODDA
Baro sida loo shido iyo loo xiro iPhone-kaaga adigoon laheyn badhanka AWOODDA
7 codsi si loo abuuro foomamka shabakadda
Kahor intaanan u jeedsan naqshadeeyaha websaydhka si loo abuuro foomamka shabakadda, waxaan ku tusaynaa 7 ikhtiyaar oo wanaagsan oo noo oggolaan doona inaan si fudud u abuurno iyaga oo aan cidna u adeegsan.
Sida loo sii wado rakibaadda Microsoft Office ee Linux
Microsoft Office hadda waa lagu rakibi karaa Linux iyadoo la kaashanayo codsiyada qaarkood.
Sida loo socodsiinayo barnaamijka Windows adigoon rakibin
Adoo adeegsanaya 2 qalab oo xiiso leh, isticmaale ayaa ku adeegsan kara iyaga si loogu beddelo codsiyada la fulin karo ee laptops-ka Windows.
Themeefy wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto casharro khadka tooska ah ah oo aad hawlo u dhiibato
Themeefy waa codsi websaydh ah oo noo oggolaan doona inaan noqonno macallimiin ama arday fasallo dalxiis oo gaar ah leh.
Dayactir shilalka Windows 8 oo leh ikhtiyaarradooda boot ee horumarsan
Fursadaha kabaha ee Windows 8 ayaa si weyn nooga caawin kara markay tahay soo kabashada nidaam aan bilaabmin.
Barnaamijyada muhiimka ah ee loogu talagalay Android
Waxaa jira codsiyo badan oo lagama maarmaan u ah Android, laakiin maanta waxaan kugu soo koobeynaa 11 qaybood oo kala duwan si aad u ogaato xitaa kuwa cusub.
Adeegso isku xirayaasha Windows 7 Desktop Search
Waxaan ku baraynaa sida loo abuuro Xidhiidhiyeyaasha Raadinta ee gaarka ah boggaaga si loogu isticmaalo Windows 7 File Explorer.
Sida loo galiyo Recycle Bin Windows 7 Taskbar
Nidaam tallaabo-tallaabo ah oo loogu dhejiyo Recycle Bin ee Windows 7 Taskbar.
Sida loo kiciyo shaashadda shaashadda Windows 7 markaan ka dhaqaaqno kumbuyuutarka
Shaashadda shaashadda ayaa loo isticmaali karaa in lagu joojiyo Windows 7 si otomaatig ah marka aan isticmaaleynin kumbuyuutarka.
Browser-ka Internetka wuxuu kaydiyaa macluumaad muhiim ah oo lala socon karo haddii aynaan si sax ah u habayn.
Windows 8.1 wuxuu la yimaadaa qaabab badan oo qaab dhisme ahaan lagu dhisay, iyada oo aan cid saddexaad loo baahnayn sii-deynta cusub.
Adobe Photoshop wuxuu na siinayaa suurtagalnimada in la ballaariyo sawir xoogaa ballaadhan oo yar yar, lana ilaaliyo tayada.
Ku eeg shabakadda sida qalabka mobilada
Kudar ah oo lagu rakibi karo Google Chrome ayaa naga caawin kara inaan u aragno bogagga sida qalabka moobiilka.
Sida loogu garaaco Google su'aalahayaga
Google wuxuu leeyahay xeelado dhowr ah oo uu ku qaato adoo adeegsanaya amarro gaar ah, oo bixiya natiijooyin deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo.
Ku soo cesho faylasha la tirtiray ee leh iCare Data Recovery
iCare Data Recovery waa codsi naga caawin doona inaan soo ceshano feylal aan si kadis ah u tirtirnay.
LastPass, waa hab aamin ah oo lagu maareeyo furaha sirta ah
LastPass waa qalab la jaan qaada nidaamyada kala duwan ee hawlgalka iyo daalacashada internetka ee loo isticmaalo maaraynta sirta.
Sida loo sameeyo DownGrade Windows 8 Pro ilaa Windows 7
DownGrade ilaa Windows 7 waxaa kaliya laga sameyn karaa Windows 8 Pro iyo shuruudo gaar ah oo ay soo jeediso Microsoft.
10 Habdhaqanno Amni oo wax ku ool ah oo laga fiirsado Windows-ka
Waxaan kugula talineynaa inaad raacdo 10 ka mid ah talooyinka ugu muhiimsan si Windows-ka ugu sii shaqeeyo si wax ku ool ah.
Dhageysiga muusikada asalka ah ee Windows ee leh Atmosphere Lite
Atmosphere Lite waa aalad aan qaabeyn karno si aan u dhageysano dhawaaqyada dabeecadda ee Windows-ka asal ahaan.
Sida loo demiyo rakibidda tooska ah ee sawirrada Gmail
Khiyaamo yar yar waxaan ku horseedi karnaa joojinta rakibida tooska ah ee Sawirada Gmail.
Sida loo qaado shaashadda shaashadda Windows 8.1
Microsoft waxay sameysay horumar si waqtiga looga qaado shaashadaha Windows 8.1.
Sida loo helo barnaamijyadayda Google Chrome
Waxaan xuseynaa 3 nooc oo kale oo aad isticmaali karto si aad ugahesho desktop desktop isla markaana aad dib ugula noqoto barnaamijyada rakibay
Sida loo maareeyo galka Google Drive
Hawlo cusub oo xiiso leh ayaa lagu soo kordhiyay Google Drive si dadka isticmaala ay si fudud ugu maamuli karaan faylashooda.
Ku rakib Instagram kombiyuutar shaqsiyeed Windows ama Mac
Khiyaano yar oo aad ku awoodo inaad iska diiwaangeliso oo aad ku rakibto Instagram labada Windows iyo Mac.
U beddel kombiyuutarkaaga shakhsi ahaaneed qalabka Android
Codsi yar ayaan ku heli karnay nidaam hawlgal Android ah oo ku habboon Windows ama Mac.
Sida loo sameeyo sawir gacmeed si fudud Picasa
Picasa Waa aalad naga caawin karta inaan sameysano iskudhaf sawirro gebi ahaanba bilaash ah oo leh talaabooyin aad u yar.
Vuze Torrent Downloader: Ku Download Torrent Faylasha on Android
Vuze Torrent Downloader wuxuu naga caawin karaa inaan kala soo baxno faylalka Torrent-ka Android adoo isticmaalaya Wi-Fi:
OnAir, waa habka ugu wanaagsan ee lagu dhageysto muusikada aaladaha moobaylka ee kala duwan
OnAir waa aalad naga caawin doonta inaan ka dhagaysanno muusigga qulqulka wadaagga ah ee kombiyuutarkayaga ilaa aaladaha moobaylka ee kala duwan.
Tweedle, macmiil Twitter u ah Android
Tweedle waa macmiil Twitter u ah Android oo naga caawin kara inaan maamulno in kabadan hal koonto hal meel ah.
Beddelka qaar si aad u dhageysatid muusikada qulqulka ah
Gelinta muusiggu waa mid ka mid ah adeegyada ugu hadda jira, kuwaas oo aan ka xusi doonno waxoogaa aan ka kala dooran karno.
Sidee faallooyinka YouTube uga shaqeeyaan illaa Google+?
Haddii fiidiyowyada YouTube ay leeyihiin faallooyinka la xannibay, waxaad ka sameyn kartaa mid ka mid ah koontadaada Google+.
Gawaarida kumbuyuutarka ee Windows 8.1 si aad u maamusho codsiyadaada
Xeelado yar yar ayaan si fudud ugu abuuri karnaa tuuryo kumbuyuutar si aad ugu socodsiiso barnaamij kasta Windows 8.1.
5 beddel wanaagsan oo lagu ilaaliyo Android furayaasha
La kulan waxoogaa codsiyo ah oo aad ka soo dejisan karto Google Play si aad qalabkaaga Android ugu ilaaliso furayaasha sirta adag.
Barnaamijyada St-Metro Style ee ugu Fiican Windows 8.1
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad la kulanto codsiyo yar oo ay ku keydiso qaabkii hore ee Metro-ga ee ay soo jeedisay Microsoft ee Windows 8.1
Sida si fudud loogu soo dejisan karo fiidiyowyada 'Instagram'
15 fiidiyowyada 'Instagram' labaad ayaa si fudud loogu soo dejisan karaa barnaamijyada dibedda ama webka.
Miyaad horeyba u ogeyd sida aad ugu ciyaari laheyd Saaxiib aan La arki karin?
Saaxiibka aan la arki karin ama saaxiib qarsoon waa mid ka mid ah kulamada ugu madadaalada badan taariikhahan. Waxaan ku tusineynaa 6 bedel oo aad ku martiqaadi karto asxaabtaada.
Sida loo abuuro muuqaalkeena Google Street View
Hadda waxaan u isticmaali karnaa sawirradeenna u gaarka ah martigelinta Google+ si ay qayb uga noqdaan muuqaalka Google Street View.
Quip hadda loo heli karo aaladaha moobaylka ee Android
Quip waa codsi Android ah oo loo isticmaali karo sidii tifaftire qoraal wada shaqeyn ah.
SmallPDF iyo afarteeda shaqadood si ay khadka tooska ah ugala shaqeeyaan PDF-yada
SmallPDF waxay naga caawin kartaa inaan la shaqeyno faylasha PDF iyadoo la adeegsanayo kaliya biraawsarka internetka.
8-da degel ee ugu wanaagsan ee lagu soo dejiyo waraaqaha
Hadda waxaa jira malaayiin waraaqo oo aan ka soo dejisan karno internetka. Waxaan kuu soo bandhigeynaa 8da degel ee ugu wanaagsan ee aad kala soo bixi karto lacagaha.
U beddelo faylashaada RAR sawirada ISO si fudud AnyToIso
AnyToIso waa aalad yar oo naga caawin doonta inaan u rogo faylalka, fayl, tusayaal, DVD cajalado iyo waxyaabo badan oo ah sawirka ISO.
Sida loo xannibo aaladaha mobilada ee Apple si loogu wareejiyo carruurta
Laba dariiqo oo aad u fudud in lagu xiro aaladda Apple si kalsooni leh loogu gacan geliyo carruurta.
Diiwaangeli oo wax ka beddel waxyaabaha ugu muhiimsan Kalandarka Muuqaalka
Jadwalka Muuqaalka ayaa ah aalad aad u fiican oo naga caawin doonta inaan xusuusano dhacdooyinka muhiimka ah isla markaana aan abuuri karno waxoogaa yar oo ah sida aan xiiseyno
Boot ama ma Boot?, Magic ISO Kan sameeyey ayaa ogaan doona
Magic ISO Maker oo naga caawin kara (waxyaabaha qaarkood) si loo ogaado haddii sawirka ISO uu yahay Bootable iyo in kale.
Adigu gacantaada ku badal taariikhda sawiradayada iyo sawiradayada
Picasa iyo exiftool waa 2 badal oo aad u fiican oo aan u isticmaali karno inaan ku badalno taariikhda sawiradeena.
Falanqee sawirada disk-ka MobaLiveCD
MobaLiveCD ayaa naga caawin karta inaan xaqiijino haddii sawirka ISO leeyahay boot bootable iyo in kale.
Ku maamul dhammaan erayga sirta ah F-Secure Keyword Manager
F-Secure Maareeyaha Furaha Furaha waa codsi yar oo naga caawin kara inaan ku maareyno dhammaan aqoonsiyada helitaanka hal meel.
Waa maxay muuqaalka muuqaalka muuqaalka ee VHD?
Isticmaalka Windows 7 Recovery Disc, waan soo ceshan karnaa OS-ka lagu marti qaaday muuqaalka VHD disk-ka.
Ku maaree adeegyo badan daruuro leh 'Multcloud'
Multcloud waa adeeg bilaash ah oo naga caawin kara inaan maamulno boos kaydinta kala duwan oo daruurta ah oo hal meel ah.
XBox Tooska ah ee shabakadda? Marka aan ka mid noqonno iyada oo leh Windows 8
Haddii aad leedahay akoon Microsoft ah oo qoran (sida Hotmail.com) markaa waxaad horeba ugu raaxeysan lahayd XBox Live shabakadda.
"Waxaan go aansaday inaan si joogto ah u xiro akoonkeyga Hotmail"
Baro habka saxda ah ee sida joogtada ah loogu xiro akoonka Hotmail adoo dooranaya mid ka mid ah 2 beddel ee hadda jira ee hawshan.
Uruurinta tifaftirayaasha qoraalka webka minimalist
Waxay hoy u tahay mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan tifaftirayaasha qoraalka ee websaydhka, oo bixiya shaqooyin aasaasi ah oo muhiim ah.
Volafile.io waxay faylasha kula wadaagtaa si qarsoodi ah isticmaaleyaasha kale
Volafile.lo waa adeeg daruur ah oo noo oggolaan doona inaan ku wadaagno faylasha qolalka ama kooxaha aan la aqoon.
Penflip, oo ah Tifatiraha Qoraalka Tooska ah ee fudud oo iskaashi ah
Penflip waa tifaftire qoraal yar oo daruur ku saleysan oo ku martiqaadi kara isticmaaleyaal badan inay ka shaqeeyaan mashruuc gaar ah.
Gab gab Windows 8 adeegga Windows Store
Bakhaarka Windows waa codsi ka muuqda shaashadda Windows 8 Start Screen, oo si ku meelgaar ah dib loogu soo celin karo.
myMail, oo ah macmiil emayl aad u fiican oo loogu talagalay Android iyo iOS
myMail waa aalad yar oo macmiil ahaan ugu adeegta emaylkeena, laakiin waxay ku habboon tahay aaladaha Android iyo iOS.
MediaFire Desktop, waa hab fudud oo daruurta loogu isticmaalo 10 GB
MediaFire Desktop waa macmiil adeegga daruurta martigeliya ee aan ugu isticmaali karno Windows-ka meel 10 GB oo bilaash ah.
Liiska ciyaartoyda ugu wanaagsan ee muusikada waa: PowerAMP, doubleTwist, N7 Player, Neutron Music Player iyo VLC. Shan xulasho oo qumman oo loogu talagalay kuwa jecel muusikada
Sidaad u curyaamin karto barnaamijyada ka bilaabmaya Windows
MSConfig waa amar Windows ah oo loo adeegsan karo in lagu joojiyo barnaamijyada qaar ee ka bilaabanaya OS isla markaana lagu wanaajiyo waxqabadkooda.
Isku-darka 10-ka Launchers ee ugu wanaagsan Android
Waxaan xusi doonnaa 10-ka Launchers ee ugu wanaagsan Android, iyadoo in yar laga hadlayo astaamaha ugu muhiimsan ee iyaga ka mid ah.
Barashada sida loo maareeyo feylashayada Windows Live Photo Gallery
Windows Live Photo Gallery Waa aalad yar oo naga caawin doonta inaan sawirada iyo fiidiyowyada kula wadaagno shabakadaha bulshada iyo adeegyada kale.
Adeegsiga howlaha ugu muhiimsan YouTube-ka
YouTube wuxuu leeyahay Transcript oo ah mid ka mid ah howlaha ugu xiisaha badan ee na siin doona inaan si fiican u fahanno fiidiyoowga inta uu ciyaarayo
Hel sarrifle badan oo lacag ah aaladaha kala duwan
Beddelka lacagta xiisaha leh ee aad ku isticmaali karto aaladda mobilada ama kombiyuutarka adoo adeegsanaya arjiga shabakadda.
Hab fudud oo loo abuuro disk dalwaddii ah ee Windows
Dataram RAMDisk waa aalad yar oo naga caawin doonta sameynta disk dalwad ah oo ku saleysan isticmaalka nidaamka xasuusta RAM.
Laba jeer taabo si aad ugu furto Mac garaaca
Garaaciddu waa aalad yar oo ka caawisa furitaanka Mac-da adigoo laba-jibbaaraya shaashadda iPhone-ka.
Ma jiraa qof la socon kara emaylkeena?
Dhowr tabaha, waxaan awoodi doonnaa inaan ku ogaanno haddii emaylladayada ay bixiyaan asturnaanta macluumaadka waqtiga la dirayo.
Khiyaanooyinka lagu ogaanayo cidda gashay koontadayda emailka
Mid ka mid ah su'aalaha ugu caansan ee internetka waa: Koontada emaylka; Xeelado yar yar ayaynu ku garan karnaa inuu qof sameeyey.
Sida loogu cusbooneysiiyo macluumaadka kujira Xiriirkeena Gmail si otomaatig ah
Adoo adeegsanaya makro Google, waxaan cusbooneysiin karnaa macluumaadka xiriirka aan rabno si otomaatig ah.
Ku samee qoraal-qoraal-qoraal ah oo ku hadlaya hadalka
talktyper waa codsi websaydh ah oo dhaqaajinaya makarafoonka kombiyuutarkayaga si aan u bilaabi karno amar qaadashada iyo u beddelashada wax walba qoraalka.
Adeegga martigelinta MEGA, maxaad ugu isticmaashaa kuwa kale?
MEGA waxay ku siineysaa suurtagalnimada inaad haysato 50 GB oo meel daruuraha ah oo gebi ahaanba bilaash ah daruuraha taleefannada gacanta iyo kombiyuutarada shaqsiyadeed.
Raadinta habka ugu wanaagsan ee looga saari karo barnaamijyada ku jira Android
Halkan waxaa ah laba beddelaad oo si fudud loo-raaci karo si looga tirtiro codsiyada qalabkaaga Android.
Sida loo demiyo Windows Live Mail ee Firefox
Windows Live Mail waa adeegga caadiga ah ee ka jira Mozilla Firefox marka uu sawir ka dirayo biraawsarka e-mailka.
Maxay tahay sababta aan ugu kaydin karno macluumaadka kumbuyuutarka pendrive
BitLocker waa codsi isku dhafan Windows 7 iyo Windows 8 oo noo oggolaan doona inaan xannibno marin u helidda USB pendrive oo leh eray sir ah.
Si ammaan ah u hel oo ka saar lambarka sirta ah Firefox
Xeelado yar yar ayaad ku heli kartaa inaad xulasho ku tirtirto ama dhammaan ereyada sirta ah ee lagu marti geliyey Firefox.
Screenshots leh ShareX ilaa daruurta iyo kombiyuutarka
ShareX waa codsi furan oo furan kaas oo noo ogolaanaya inaan ku qaadno shaashadda siyaabo kala duwan oo kala duwan.
Hab fudud oo loo abuuro quudin RSS RSS ah
Suurtagalnimada in la abuuro quudin RSS ah oo ku saabsan daabacaaddayada Twitter-ka ayaa suurtageliyay mahadnaq qoraal ay bixisay Google
Sidee wax looga beddelaa dhinacyada qabow ee OS X deck? (II)
Qeybtan labaad, waxaan ku falanqeyneynaa dhinacyo kale oo aan wax ka beddeli karno dekedda Mac-dayada nidaamka qalliinka: OS X Mavericks
Dib u eegid: Sida sawirada loogu soo dejiyo Soo Degsashada Sawirka si fudud
Soodejiyaha Sawirka waa qalab yar oo Google Chrome ah kaas oo naga caawin doona inaan kala soo baxno qaybo ka mid ah sawirada lagu marti galiyay degel.
OSX Mavericks kuu oggolaan maayo inaad ku rakibto codsi gaar ah Mac-gaaga, baro sida loo sameeyo
Waxaan ku baraynaa inaad maamusho xulashooyinka amniga ee OSX Mavericks ay tahay inay awood u yeeshaan inay ku rakibaan codsiyo dhinac saddexaad ka baxsan Mac App Store
Dib u eegid: Trick si loola socdo farriimaha aan dirno oo aan u ogaano haddii la akhrinayo
Laba adeeg oo xiiso leh oo ku saabsan websaydhka ayaa naga caawinaya inaan ogaano haddii e-mailkayaga la akhriyey iyo in kale iyadoo lala socdo dhaqdhaqaaqooda.
Ogow oo sida ugu habboon ugu habayn Maareynta Howlgalka OSX Mavericks
Waxaan kuu sheegeynaa waxa howlgalka Mission uu ku saabsan yahay Mac iyo sida ugu habboon ee loo qaabeyn karo
Ku tafatir faylasha Excel, Word iyo Powerpoint barnaamijka HOPTO ee iPad-ka
Hopto, waa codsi cusub oo wax looga beddelayo faylasha Xafiiska ee ku jira iPad-ka
Dib u eegid: Beddelka lagu sameeyo Windows
Si aan si buuxda ugu soo celino nidaamkeena oo dhan barnaamijyadii aan ku rakibey Windows, waxaan soo jeedineynaa buug si fudud loo raaco
Sida loo dedejiyo howlgalka kumbuyuutarka
Si loo dedejiyo howlgalka kumbuyuutarkeena waa inaan raacnaa talaabooyinka soo socda. Kombuyuutarku wuxuu u shaqeyn doonaa sida maalinta koowaad.
Ku rakib AppLock on your Android oo siiso amaan barnaamijyadaada
Waxaan kuu sharaxeynaa tillaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad ugu dhigto lambarka amniga codsiyada aad rabto iyada oo loo marayo AppLock
Nooca Android 4.4 ayaa loo sii daayay Nexus 7
Nooca Android 4.4 ayaa loo sii daayay 7 Nexus 2013
Dib u eegid: Sida loo jajabiyo ereyada sirta ah ee Firefox iyo Google Chrome
Dib u eegis ku saabsan sida loo ogaado furaha sirta ah ee lagu keydiyey Firefox iyo Chrome talaabo talaabo ah iyadoon la helin codsiyo dhinac saddexaad ah.
Xisaabta Windows 8 oo leh kontaroolada ugu yar ee talaabooyin yar
Waxaan ku baraneynaa casharkaan si aad akoon uga sameysato Windows 8 oo leh kontaroolo yar
Dhawr khiyaano oo loogu talagalay kuwa ka bilaabay barta Instagram, dhammaantood sharci ahaan si looga fogaado ciqaabta.
Xulashada Shakhsiyeed: Ciyaaraha 5 ee aan ugu jeclahay macruufka
Maqaalkan waxaan rabaa inaan ku tuso kuwaas oo ah 5 kulan ee aan ugu jeclahay macruufka adoo adeegsanaya App Store si aad u soo dejiso mar dambe.
Sidee fiidiyowyada offline-ka ah ee YouTube-ku u shaqeyn doonaan?
Youtube ayaa hadda xaqiijisay in hawsha lagu daawanayo fiidyowyada aaladaha mobilada iyada oo aan internet la samayn la bilaabi doono bisha November.
Tim Cook wuxuu ku dhiirrigeliyaa shaqaalihiisa emayl
Dhammaan shaqaalaha Apple waxay uun ka heleen emayl Tim Cook oo ku dhiirrigelinaysa inay sii wadaan shaqadooda iyo kordhinta fasaxa
Keydso oo la wadaag erayada dhammaan heesahaaga musiXmatch
Haddii karaoke ay tahay sheygaaga ama aad kaliya rabto inaad ogaato waxa fannaaniinta aad ugu jeceshahay gabyaan, musiXmatch ayaa kaa caawin doonta inaad ogaato erayada heesahaaga.
Shanta ciyaartoy ee ugu fiican muusikada kombuyuutarkaaga
Waxaan kuu keenaynaa shan ciyaartoy oo muusig oo waaweyn oo loogu talagalay PC ama Mac, oo ay adag tahay in la doorto midka ugu fiican, laakiin shan fursadood oo aad muhiim ugu ah muusikada jecel.
Tilmaamaha ugu wanaagsan ee macruufka 7 oo faahfaahsan (II)
Mashruucan waxaan ku falanqeyneynaa 4 astaamo oo kala duwan: Siri, Sawirro, Safari iyo AirDrop.
Adeegsi noocee ah ayuu adeegsadaa barnaamijka 'Evernote app'?
Laga soo bilaabo buugaagta cuntada lagu kariyo, xusuus-qorrada, qorshooyinka safarka, tirinta dharka, bangiyada muuqaalka ayaa ah qaar ka mid ah adeegsiga aan ku baran doonno Evernote.
Tutorial: La barbardhig iTunes iyada oo aan lumin xogtaada
Waxaan kuu soo bandhigeynaa talaabo talaabo ah sida loo waafajiyo iDevice-kaaga markii ugu horeysay oo aad Lugood kula jirto PC-gaaga ama Mac-gaaga si aadan u lumin xogta
Shan codsi oo muhiim ah si aad ugu shaqeyso Android
Codsiyada socda ee ay Android leedahay ayaa ah wehelka ugu fiican ee duubista jidadka, tirakoobka iyo wadaagista wax kasta oo ku saabsan Facebook iyo Twitter.
Nadiifinta taariikhdaada Google waa mid aad u fudud. Halkan waxaa ku yaal buug-tilmaameed tallaabo-tallaabo ah si aad u nadiifiso taariikhdaada Google. Ka nadiifi raadinta qaaska ah dhibaato la'aan
Tilmaamaha ASO: Meeleynta barnaamijyada ku yaal dukaanka barnaamijka
ASO (App Store Optimization) waa mid aad muhiim u ah maadaama la'aanteed aanan si sax ah ugu meeleyn doonin codsigeena dukaanka arjiga.
Auto Refresh Plus, si toos ah ayuu u cusbooneysiiyaa bogagga
Auto Refresh Plus waxay u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha Chrome inay cusbooneysiiyaan hal ama bog internet oo kala duwan si otomaatig ah waqti go'an.
Barnaamijyada fariimaha ugufiican, ee lagu beddelan karo iMessage, kuwa isticmaala macruufka
BackBerry Messenger (BBM) waa mid ka mid ah sababaha ugu waawayn ee dadku wali ugu dheganaadaan aaladaha ...
CUT CUT - Tifatiraha fiidiyowga ee bilaashka ah ee bilaashka ah oo leh jadwalka Kala-Bixinta
CUT CUT waa codsi caalami ah (oo loogu talagalay iPhone iyo iPad) waxaana kuxiran qalab aad u qurux badan oo ka yimid ...
RockPlayer2 wuxuu la yimaadaa istcimaalo adeegsade xarrago leh iyo ikhtiyaar ah in lala wadaago multimedia-ka isla markaana lagu daawado fiidiyowyo toos ah oo toos ah
Mudo ayey aheyd markii RockPlayer2 loo diyaariyey dadka isticmaala macruufka, hadana waa waqtigii for
Toobiyeyaasha Firefox ee daalacashada degdegga ah
Chrome iyo Firefox - laba ka mid ah daalacashada shabakadaha ee ugu caansan - waxay leeyihiin toobiyeyaal kumbuyuutar aad u eg, laakiin haa ...
Hees! Hees! Wixii iPhone ah: ku raaxee heesaha karaoke qof kasta oo adduunka ah
Hees! waa codsi kuu oggolaanaya inaad sameyso noocyada karaoke ee heesaha aad jeceshahay, laakiin halkaas kuma joogsan. Waxaa jira…
Kumbuyuutarku waa aaladda wax soo gelinta ee durugsan oo adeegsanaysa isku dubaridaha furayaasha, si markaa ay ugu dhaqmaan sidii ...
Rom Sharing waa codsi bilaash ah oo na siiya 6 emulators kala duwan oo khadka tooska ah ah oo kombuyuutarrada caadiga ah leh oo midba midka kale la ciyaarayo.
Waa maxay ip?. Sida loo ogaado IP-ga aad ku xirmaan internetka
Haddii aad rabto inaad ogaato sida aad u arki karto IP-gaaga iyo waxa loogu talagalay, sii wad aqrinta casharradan yar ee ku saabsan cinwaankaaga IP. Soo ogow waxa IP-gaagu ku jiro wax ka yar hal daqiiqo.
La soco Ciyaaraha Olambikada ee London 2012 NBC Olympics iyo NBC Olympics Live Extra [Android, iOS]
Haysashada Android ama iPhone dhab ahaantii waxay u socon kartaa waddo dheer xagga dherjinta gaajadaada aqoonta isboortiga. Gudaha…
Muxuu Airdroid isku xiri doonin?
Airdroid waa codsi noo oggolaanaya inaan ku xirno qalab kasta oo aan leenahay mulkiilaha nidaamka hawlgalka Android kombuyuutarkaaga fog.
IE Tab, ku dayasho Internet Explorer ee Google Chrome
IE Tab wuxuu noo ogolaanayaa inaan si qumman ugu dayano mishiinka wax soosaarida Internet Explorer ee ku dhexjira Google Chrome interface.
Siyaabaha ugufiican ee loo diro feylasha qoraalka oo lawadaago Mac-ga qalabka kale
Mid ka mid ah siyaabaha ugu caamsan ee lagu diro feylasha ama qoraalka ayaa ka weyn email ama fariimo deg deg ah messengers.
jetAudio wuxuu u keenaa Android muusig awood badan oo loo habeyn karo muusig
Markaad ka hadlayso qaar ka mid ah kuwa ugu muuqaal-hodanka badan oo si ballaadhan loo adeegsado, qalabka maqalka ee desktop-ka, jetAudio,…
Tilmaame Tab cusub, dooro bogga tab cusub
Cashar fudud oo lagu dejinayo bogga ugu dambeeya ee Google markii la furayo tab cusub oo ku jira Google Chrome.
Sida loo sameeyo toobiye bogga aad ugu jeceshahay
Cashar fudud oo leh sawirro ku saabsan sida loo abuuro toobiye ahaan codsi websaydh aad jeceshahay.
Ku qaado shaashadda shaashadda Horudhaca u ah Mac iyo tabaha kale [Talo]
Dusha sare ee, muuqaalka sawir-qaadaha ee Mac-ga ayaa u muuqda mid dhexdhexaad ah. Hubaal, waxay kuu oggolaanaysaa inaad aragto ...
Qabashada fiidiyowga si loo abuuro animations sawir gacmeed bilaash ah oo ku saabsan iPhone / iPad
Dukaanka iTunes App waxaa ka buuxa barnaamijyo sawir iyo muuqaal ah, marwalba iyo kadib, waxaan aragnaa see
Masatu loogu talagalay Android iyo iOS: ku abuuri kaabsoosha sawir waqti isku meel ah kuna arag xaqiiqda la kordhiyay
Ku cusub dukaanka Google Play iyo iOS App Store, Masatu waa shabakad casri ah oo madadaalo ka buuxo ...
Alarm Clock Ultra, codsiga ugu fiican uguna dhameystiran ee alaamka loogu talagalay Android
Codsiga ugufiican ee subaxa kugu toosiya
IllegalAlienReport.com: Waa goob lagu ogaado laguna soo sheego sharci-darro gudaha Mareykanka
Bog cusub ayaa soo jiitay dareenkeena. Kani waa IllegalAlienReport.com, degel loo sameeyay in lagu ogaado laguna soo sheego sharci darro ...
Barnaamijyada P2P ee ugufiican Android
Maanta, shabakadaha P2P ee loogu talagalay Android ayaa dib loo cusbooneysiiyay sida habab aad u wanaagsan oo loogu gudbiyo feylasha masaafo dheer.
Kaydinta FaylkaFFort, u samee kaydinta dhammaan dukumiintiyada, sawirrada iyo faylalka muusikada ee serverka FTP
Kaydinta faylka loo yaqaan 'FileFort Backup' waa adeeg fudud oo xog uruurin ah oo awood leh oo si toos ah awood ugu leh keydinta ...
Xarunta Xalinta Windows Live: Dhibaatooyinka Microsoft ku hagaaji
Kuwa u baahan adeeg farsamo si ay u xalliyaan dhibaatooyinkooda la xiriira alaabada Microsoft, gaar ahaan ...
Iorad - Abuur buugaag is dhexgal ah si fudud
iorad waa codsi websaydh ah oo noo oggolaanaya inaan si dhakhso leh oo fudud u abuurno buugaag is dhexgal ah
Maxay yihiin sanduuqyada wadahadalka maxaase loogu talagalay?
Waxaa loo yaqaan sanduuqa wadahadalka dhammaan daaqadaha soo-baxa ee ka muuqda bartamaha isticmaalka guud ee ...
Sidee loola xiriiriyaa kormeeraha processor-ka?
Kormeeraha kumbuyuutarka ama shaashaddu waa aalad bandhig oo badanaa ah shaashad khafiif ah oo loo yaqaan 'TFT-LCD', oo ...
PDF Sb - Mashiinka raadinta tooska ah ee buugaagta qaab PDF ah
pdf sb waa codsi websaydh oo bilaash ah oo na siiya mashiin pdf fayl raadineed awood leh oo leh in kabadan 7 milyan oo buugaag elektaroonig ah oo ku jira Database-keeda
Waa maxay faylasha SWF?
Faylasha dhammaadkoodu yahay SWF ayaa ah feylashaas qaabkooda qaababyo kala duwan leh, sawirada vektorka, iyo koodhka ActionScript, oo…
Abuur Saxeexyo Dhaqaaq leh
Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad u sameyso shaqo tafatir kumbuyuutar-kumbuyuutar ah sawirradaada ama waxyaabaha ku jira websaydhka, ha ...
Maxay yihiin faylal ku meel gaar ah maxaase loogu talagalay?
Mid ka mid ah howlaha ugu xiisaha badan ee nidaamyada hawlgalku leeyihiin ayaa ah in la abuuro feylal ku meel gaar ah oo caan ah, ...
Barnaamijyada lagu sameeyo Triptychs
Gawaarida sida aad u ogtahay waa nooc macluumaad macluumaad ah oo isku laaban saddex qaybood, halkaas oo ...
Emails ayaa markii ugu horeysay la siidaayay sanadkii 1965 waxayna soo mareen wado dheer tan iyo ...
Erayo - U fiirso qoraal leh noocyo kala duwan isla waqti isku mid ah
wordmark waa codsi aad u fiican oo noo ogolaanaya inaan ku fiirsanno qoraal noocyo kala duwan ah isla waqtigaas si aan u go'aansanno qaabka ugu fiican
Naqshadee dharka arooskaaga ee internetka oo leh dharka Arooska
dharka arooska waa codsi kuu oggolaanaya inaad qaab fudud oo dhaqso ah ugu qaabeyso dharka arooska ee internetka
Soodejiso noocyada kala duwan ee Google Chrome
Maalmo ka hor Google Chrome waxay heshay nooc xasiloon oo cusub, lambarka 9, oo ah taariikh weyn haddii ...
U rogo sawiradaada Zombies leh Zombifier
zombifier waa codsi noo oggolaanaya inaan wejiyadayada ku jira ugu beddelno sawirrada sawir-gacmeedyada zombies abuurista sawir-qaadis saameyn aad u wanaagsan
U turjun wixii duubis maqal ah oo qoraal ah VoiceBase
Voicebase waa codsi noo ogolaanaya inaan ka bedelno feylasha maqalka si qoraal ah qaab fudud oo bilaash ah, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan turjumaano sameyno.
Taariikh kooban oo ah nidaamyada hawlgalka ee Mac OS
Markan waxaan dooneynaa inaan nafteena u hibeyno ka hadalka taariikhda nidaamyada hawlgalka Mac OS. Noocii ugu horreeyay ...
Sida loo hagaajiyo furayaasha PC-ga ee aan shaqeynin
Marar badan waxaan wax ku qoreynaa kumbuyuutarka meel ama waxaan ka hadlaynaa MSN, waxaanan ogaanay inay jiraan ...
Sidee loo dhahaa "waan ku jeclahay" xisaab isla'eg ah
Xaqiiqdii, fikradda ku jirta sanduuqa cinwaankeedu yahay Nerd Love Solve for "i" waa midka ugu xiisaha badan ee la yiraahdo "waan ku jeclahay" ...
Ku habeyn Firefox leh Rotator Personas
Qoraalkan loogu talagalay qaabeynta biraawsarka adoo beddelaya sheybaarada u shaqeeya sida maqaarka horay loo qorsheeyay, oo kolba meertada u dhexeysa ...
Xagee ka helaa galka dukumiintiyada dhawan
Ku soo wareegga shabakadda, maalin kasta waxaan la kulannaa sawirro iyo nooc kasta oo macluumaad ah oo aan ka helno soo jiidasho, qosol ...
Hubi farriintayda kulul
Hotmail shaki la’aan waa mid ka mid ah adeegyada emaylka ee sida weyn loo isticmaalo, tanina waxaa ugu wacan heer sare ...
Mid ka mid ah nidaamyada hawlgal ee ugu isticmaalka badan maanta waa Android, oo ay iibsatay Google sanadkii 2007 oo leh astaamo xiiso leh.
Firebug loogu talagalay Chrome
Firebug waa mid ka mid ah sababaha qaar ka mid ah horumariyeyaasha shabakadu aysan ugu wareegin Firefox ee Chrome. The…
Sidaan horeyba u ognahay, waqtiyadii ugu dambeeyay, tikniyoolajiyadda waxay ku hormartay boodbood iyo xuduudaha aagga madadaalada guriga iyo ...
Kordhin si aad u soo dejiso fiidiyowyada YouTube-ka ee Google Chrome
Kordhinta adeegyada Google ee loogu talagalay Chrome ee aan soo bandhignay, midka ugu muhiimsan ...
Nuqul ku samee tab toobiye ah
Si aad u nuqul u sameysid tab, waxaan caadi ahaan ku gujineynaa tabtaas oo waxaan aadeynaa ikhtiyaarka nuqul. Laakiin haddii aad tahay ...
Tilmaamaha kiiboodhka Google Chrome
Markii aad bilowdo adeegsiga tuubbooyinka kumbuyuutarka ee barnaamij kasta, waxaad fahantay waqtiga la gaari karo ...
Ku rakib Google Chrome qad la'aan
Xidhiidh si loo rakibo biraawsarka ayaa lagu bixiyaa bogga rasmiga ah ee Google Chrome. Sida kaliya ee suuragalka ah waa ...
Internetku wuxuu bedelay qaabkii loola xiriiri lahaa adduunka oo dhan, dhammaan macluumaadka markii hore laga yaabo inay dhib badnaayeen ...
Internetka qarniga XNUMXaad
Internetka, sidaan ognahay, waa u shaqo dad badan, maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan qabano shaqo haddii ...
Barnaamijyada ugufiican ee lagu sameeyo qoraalka
Haddii aad tahay taageere naqshad casri ah oo aad jeceshahay inaad ka dambeyso darbiyada adigoo ku raaxeysanaya weyn iyo madadaalo ...
Baro isku xidhka Google Chrome (II)
Kumbuyuutarka waxaad kuheli kartaa talo toos ah dusha desktop-ka, oo aad si toos ah ugu bilaabi karto barnaamijyada websaydhka ...
Astaamaha iyo faa'iidooyinka Google Chrome
Shirkadda caalamiga ah ee caanka ah, Google, waxaa la aasaasay sanadkii 2008 sidaad ogtahay, baalasheeda internetka, casriga ah, ...
Norton Astaamaha Antivirus
Ma waxaad raadineysaa fayrus wanaagsan oo difaacaya kombiyuutarkaaga 24 saacadood maalintii? In kasta oo ay run tahay in dalabku ...
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka emaylka
Waxaan si fiican u ognahay in iimaylku yahay mid ka mid ah ikhtiraacyadii kacaan ee xilliyadan dambe isla markaana leh ...
Waxaan sii wadeynaa inaan waxbadan kabarano dhanka mugdiga ah ee xisaabinta. Waxaan ula jeednaa jajab. Mid ka mid ah nooc ka mid ah ...
Noocyada Gidaarrada: Faa'iidooyinka iyo Khasaaraha
Waxaan horeyba uga ogaanay gidaarrada lakabka shabakadda ama shaandhada baakadaha, waa waqtigii aan ku baran lahayn mid kale ...
Sida looga saaro barta calaamadaha cusub ee Bar Google
Baarka cusub ee Google wuxuu ku darsaday ugu horreyn shaqeyn cusub oo laga yaabo inaysan jeclaan qof walba ...
Mararka qaar markaad tagto YouTube-ka oo aad rabto inaad raadiso fiidiyoow, natiijooyin badan ayaa soo baxa sidaa darteed waxay noqon kartaa mid xiiso leh ...
Ku rakib nooca ugu dambeeya ee Adobe Flash Player Google Chrome
Isticmaalayaasha Google Chrome waxay ogaadeen in mararka qaar aanan ciyaari karin fiidiyaha YouTube-ka iyo goorta ...
Waa maxay bog? Balooggu ma la mid yahay madal ama xariir? Halkan waxaad ka heli doontaa farqiga u dhexeeya waxa uu yahay baloog iyo waxa aan ahayn baloog, oo lagu sharxay hab madadaalo leh iyo tusaalooyin.
Abuur xisaab Gmail
Casharro iyo hagitaan si loo abuuro xisaab ku jirta Gmail, boostada bilaashka ah ee Google ee kuu oggolaan doonta inaad hesho adeegyo kale sida YouTube, Google Play iyo kuwo kale.
Maxay yihiin Darawallo ama Kontroolayaal
Waa Maxay Darawallo? Maxay Darawalo u yihiin? Halkan waxaad ka heli doontaa waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato Darawallada (ama kontoroolayaasha) oo si fudud loogu sharraxay iyo sawirro.
Qodobka saddexaad ee ku saabsan saddex-geesoodka khataraha internetka.Haddaba, ku saabsan cyberterrorists iyo qaababka ay adeegsadaan.
Buug-gacmeedka Ares. Rakibaadda iyo qaabeynta Ares 2.0.9
Buugga Ares ee Isbaanishka. Buuggan qayb ka mid ah nooca '2.0.9' ee caadiga Ares waxaan ku arki doonnaa sida loo rakibo loona qaabeeyo barnaamijka si fudud looga soo dejisto dhammaantoodna Isbaanish iyo sawirro badan.
Ku xakamee faallooyinkaaga booska ka wanaagsan
Tilmaamaha faallooyinka si ay u caawiyaan booska oo aan ahayn ka soo horjeedka. Waxyaabaha ay tahay inaad sameyso iyo kuwa aadan waligaa sameyn. Tail Long, trolls, silsilado raadin, iwm.
Faallooyinka iyo istaraatiijiyada meeleynta.
Faallooyinka ayaa lagama maarmaan u ah bulsheynta bulsheed, laakiin markaad meeleyneyso boostada waa inaad ku dartaa istiraatiijiyadda meeleynta haddii aad rabto dhammaan shaqadaada bogga inaad wax ku ool u noqoto wajiyada matoorada raadinta.
AdSense iyo Isticmaalka. AdSense Paradox
Adsense ka soo horjeedka ayaa khilaafsan isticmaalka. Haddii aad rabto inaad lacag ku hesho Adsense waa inaad marka hore u hesho taraafik hufan bartaada. Haddii aad in ka badan ka sarreysiiso xayeysiintaada marka aad booqashooyin yar leedahay, waxaad waayi doontaa suurtagalnimada inaad sii korodho
PPS. Waa maxay faylasha ppsx iyo sida loo arko feylasha leh kordhinta .ppsx
PPS. Faylasha leh kordhinta .pps / .ppsx waa bandhigyo laga sameeyay Microsoft PowerPoint. Noocyada faylasha waxaa sidoo kale loo yaqaan pps / ppsx
Sida loo galiyo calaamadeynta sawirradeenna
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo geliyo calaamadeynta sawirradaada, waa inaad aqriso casharradan tallaabo-tallaabo ah ee sharraxaya sida loogu daro astaan-biyood ama WaterMark dhammaan sawirrada aad ku isticmaasho balooggaaga.
Adigu - noqo kuleyl oo saaxiibbadaada u noqo elves
Laakiin fiiri sida jilibyadu ugu qoob-ka-ciyaaraan webiga .... haddii aad rabto inaad aragto asxaabtaada oo loo beddelay elves-ka ugu qosolka badan waa inaad isku daydaa ElfYourself
Tijaabinta Iskuday aniga blogger!
Bog kale oo maraya LA'AAN Yuro iyada oo loo marayo bogagga Vinagre Asesino. Miyuu soo bixi doonaa isagoo nool ama dhintay?
Virustotal.com wuxuu falanqeeyaa feylasha oo leh 32 antivirus kaladuwan, khadka tooska ah, oo bilaash ah iyo Isbaanish
Isugeynta Virus Total waxay kuu ogolaaneysaa inaad falanqeyso feyl kasta oo leh 32 barnaamijyo antivirus oo kala duwan oo khadka tooska ah, Isbaanish ah iyo gebi ahaanba bilaash ah.
Maxaa ka dhigaya baloog weyn mid weyn? Xagee ayuu ka yimaadaa wararka aan tixraacyada wadin? Ma anshax baa nahay?
Maqaalka ugu horreeya ee lagu daabacay Tribuna Libre by Victormx, laga bilaabo ElNecio.com. Miyaad ku raacsan tahay gunaanadkooda ama ma la wadaagaysaa?
Beddel lambarka sirta ah ee boosteejada. Sida loo beddelo lambarka sirta ah ee Windows Live Hotmail
Beddelidda erayga sirta ah ee 'Hotmail' waa mid aad u fudud, laakiin dadka isticmaala qaarkood waxay la kulmaan dhibaatooyin inta lagu jiro beddelka ereyga sirta ah. Akhriso casharkaan si aad u ogaato sida loo sameeyo isbedelka talaabo talaabo.
Sida loo xigto ilaha aad u isticmaasho maqaalladaada oo ka taxaddar PCP-yada
Haddii aadan hubin inaad si sax ah ugu xirmeyso ilaha macluumaadkaaga, waa inaad aqriso maqaalkan
5 waxyaabood oo ay tahay inaad ka ogaato memes
Dhammaan waxyaabaha dhalaalayaa maahan wax meme ah :) halkan waxaa ah shan shay oo ay tahay inaad ka ogaato memes-ka si aad uga faa iideysato aaladan bulsheed ee ku saabsan kor u qaadista baloogyada.
Maxay tahay isticmaalka kala goynta darawal adag
Wareejinta Hard Drive. Haddii aad had iyo jeer maqashay inaad qashqashaad ku sameyso darawalkaaga adag laakiin aadan ogeyn sababta ay tahay inaad u sameyso, waa inaad aqriso maqaalkan ku saabsan jajabinta waadna hubsan doontaa.
Waa maxay kaarka sawirada ee aan rakibay? iyo noocee ah kaarka sawirada ee aan rakibi karo?
Haddii aad rabto inaad bedesho kaarka sawirada oo aadan aqoon midka aad rakibtay, ama midka aad rakibi karto, waa inaad aqriso buugan.
Taariikhda khiyaanada lagu dhawaaqay
Haddii aad ka qayb qaadatay tartanka Gedket, waa inaad ka saartaa iskuxirayaasha tilmaamaya barta, maaddaama Gedket uu go'aansaday inuu ku qoslo dhammaanteen kuwa kaqeyb galaya.
Sida loo adeegsado labo Messenger isku kombiyuutar isla waqtigaasna
Isticmaal laba Messenger isla mar. Haysashada laba farriin oo leh akoonno emayllo kala duwan oo isku mar furan waa mid aad u fudud buuggan yar ee tallaabo-tallaabo ah.
Sida loo ogaado waxa uu yahay cinwaanka IP-ga ee emailka Hotmail
Haddii aad u baahan tahay inaad ogaato cinwaanka IP-ga ee diraha kuu soo diray emailka Windows Live Hotmail, casharradan kooban waxaad ku arki doontaa sida ay u fududahay in sidaas la sameeyo.
Miyaanay geesiyaal ku jirin barta internetka? Meme: Geesiyaasha ku dhex jira wax qorista
86400, Emezeta iyo Greenshines waa qaar ka mid ah kuwa i caawiyay iyagoon ogayn inay abuuraan Killer Killer.
Sida sawir loogu dhigo saxiixa shaqsiga ah Windows Live Hotmail-ka cusub
Haddii aadan aqoon sida loo qaabeeyo saxeexaaga shakhsi ahaaneed ee Muuqaalka cusub (Hotmail) ama sida loo dhigo sawirrada saxiixaaga, waa inaad aqriso buugan.
Sida loo furo Windows XP Task Manager
Sideen ku furaa Maamulaha Hawsha? In Windows XP si aad u furto Task Manager waa inaad riixdaa isku darka saddex fure isku mar.
Sideen ku abuuri karaa MySpace-kayga? Tallaabo tallaabo tallaabo ah.
Haddii aadan aqoon sida loo helo boggaaga gaarka ah ee MySpace, raac casharradan waxaadna arki doontaa sida loo sameeyo tallaabo tallaabo.
!!! Iska jir Spam¡¡. Xariifad baa ku jirta dabacsan gurigaaga ayeyna soo waceysaa
Spam waa qashinka ay ugu diraan emaylkeena. Ha u oggolaan naftaada in ay ku quustaan ​​qashinka oo ay bartaan sida looga fogaado.
Adeegso Messenger adiga oo aan kumbuyuutarkaaga wax ku rakibaanin MSN Web Messenger
Web Messenger MSN waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho farriinta adiga oo aan rakibin wax barnaamij ah. Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo Mesenger adiga oo aan wax ku dhejin kombuyuutarkaaga.
Phishing. Waa maxay Phishing, sida looga fogaado iyo waa maxay masuuliyada ka saaran bangiyada iyo bangiyada keydka intaan la Jirin
Phishing, pishing ama pising, wax macno ah malahan hadii si sax ah loo qoray ama si khaldan loo qoray, sikastaba xaalku ha ahaadee seddexda erey ayaa loo isticmaalay in lagu ogaado wax badan oo ku saabsan isla dhibaatada, xatooyada furaha marin u helka bangiyada internetka.
My first Meme. Sababta aan u qoro balooggeyga. Iyo maxay meme tahay?
Waa maxay meme? Aniga oo ka faa'iideysanaya xusuusteyda koowaad waxaan sheegi doonaa waxaan u maleynayo inay tahay meme, taxaddar! taas oo aan ahayn qeexitaan rasmi ah ee meme, taasi waa waxa wikipedia loogu talagalay.
Sida loogu qoro RSS quudinta iyo waa maxay quudinta RSS
Ku-qoritaanka RSS Feed waxay kuu oggolaaneysaa in laguu ogeysiiyo waxa ku daabacan degel internet ah. Baro inaad ku isticmaasho Quudinta buugan talaabo-tallaabo ah.
LAST.FM. Sida loo sameeyo koonto si loo ogaado muusig cusub adoo adeegsanaya LASTFM
Last.FM waa habka cusub ee lagu ogaado muusikada khadka tooska ah. La kulan kooxaha iyo farshaxanada cusub adoo abuuraya xisaab bilaash ah oo ku saabsan Last.fm adigoo gacan ka helaya buugan talaabo-tallaabo ah.
Ka fogow cusbooneysiinta Messenger ama dib ugu laabo noocii hore
Ma rabtaa inaad iska ilaaliso cusbooneysiinta Rasuulkaaga Ma waxaad dooneysaa inaad dib ugu laabato qaabkii hore ee Rasuulka? Si aad u sii wadato adeegsiga noocaaga MSN, akhri buugan talaabo-tallaabo ah.
Sida loo dhigo mp3-yadaada isla mugga iskana ilaali kordhinta mugga inta udhaxeysa heesta iyo heesta
Miyay mp3-yadaada mid kastaa ku dhawaaqayaa mug kala duwan Sidee ayaad ugu wada dhigi kartaa heesahaaga oo dhan isku mug? Akhriso buugan waxaadna arki doontaa sida si caadi ah loogu dhegeysto codka mp3s-kaaga.
50.000 oo bog oo muuqaal ah. Saldhigga xiga 2.000 booqdayaal maalinle ah
In kabadan 50.000 oo bog oo xamuul ah ayaa mahadsanid. Salaan dhanaan.
MP3Gain. Buugga rakibidda iyo tarjumaadda Isbaanishka ee MP3Gain
MP3Gain ayaa kuu oggolaaneysa inaad MP3-yadaada oo dhan ku soo rogto isla mugga si aadan u dhago-marin inta u dhexeysa heesaha. Akhriso buugga MP3 Gain si aad u ogaato sida looga fogaado boodbooyinkan mugga leh.
Ka-qaybgal bilaash ah kanaallada MSN.es oo ku guuleysto XBox360 adoo galaya sawir-qaadista toddobaadlaha ee tartanka
Kordhinta tes waxay ku ogeysiineysaa nooca feyl uu iska leeyahay, laakiin kordhintu waxay ku qarsoon tahay Windows ahaan. Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo arko kordhinta, sii wad aqrinta buuggan p
Meel kasta oo FM ah ayaa kuu oggolaaneysa inaad ka dhageysato muusikada aad jeceshahay meel kasta oo aad joogto. Eeg sida ay u fududahay in la abuuro koontadaada Anywhere.fm oo aad bilowdo inaad ku soo rarto heeso buuggan talaabo-tallaabo ah.
IZArc waa kombareser bilaash ah oo lagu heli karo Isbaanish (iyo in ka badan 40 luqadood) oo bixiya bedel bilaash ah oo loo yaqaan WinRAR ama WinZip. Buuggan waxaad ku arki doontaa sida loo rakibo IZArk si fudud oo tallaabo tallaabo ah.
Sideen uga bixi karaa Windows Live Hotmail-ka cusub una tagi karaa MSN Hotmail-kii hore?. Ma laaban karaa nuqulkii hore?
Ma ku laaban karaa qaybtii hore ee Hotmail? Haddii aad isweydiiso haddii aad dib ugu laaban karto noocii hore ee caadiga ahaa ee MSN Hotmail waa inaad ogaataa inaysan mar dambe suurtagal ahayn in laga soo noqdo Windows live Hotmail.
Haddii aad ku dhex marto nolosha adigoon taxaddar sameynin waxaad bixin doontaa cawaaqibka. Internetku wuxuu u hoggaansamaa isla sharciga sidaas darteedna waa inaad taxaddar u leedahay hawshaada shabakadda. Sii wad akhriska ....
Sidee loo eegaa faylasha qarsoon Raadi faylasha qarsoon ee kombiyuutarkaaga
Sidee loo eegaa faylasha qarsoon Aragtida faylasha qarsoon ee kombiyuutarkaaga waa mid aad ufudud, kaliya raac buuggan yar ee tallaabo-tallaabada ah waxaadna arki doontaa sida loo arko faylasha qarsoon ee kombuyuutarkaaga.
Hard disk buuxa? Sida loo kordhiyo booska darawalkeyga adag.
sida, helitaanka, booska, diskiga, adag, bilaashka, cabirka, maqnaanshaha, ballaadhinta, kororka, saxannada, diskiga adag, diskiga adag, buugan, barashada, khalka
Gmail. Sida loo sameeyo akoon Gmail ah oo aan lagu casuumin
Sida loo abuuro Gmail. Gmail waxay ku siineysaa emayl bilaash ah adiga oo aan u baahnayn martiqaad. Buuggan waxaad ku arki doontaa sida loo sameeyo xisaab, waxaad u baahan tahay, waxay bixiso, iwm. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato emaylka Gmail, sii wad aqrinta.
Windows Live Hotmail oo Isbaanish ah. Sideen ku badali karaa luqadda emaylkeyga Hotmail?
Hotmail wuxuu ku yimaadaa asal ahaan Ingiriisiga, haddii aad rabto inaad barato sida loo dhigo Isbaan